အငွေ့ Extractor ဂဟေ
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ဂဟေဆက်အငွေ့ Extractor -> အငွေ့ Extractor ဂဟေ
XYTRONIC INDUSTRIES LTD. အရည်အသွေးမြင့်မား၏အခြေစိုက်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ အငွေ့ Extractor ဂဟေ။ ကျနော်တို့ဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေါင်းစည်းသည့်ပို့ကုန်-oriented လုပ်ငန်းဖြစ်ကြ၏။ ကြောင့်နိမ့်ကျလုပ်အားစရိတ်နှင့်အနုပညာထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ၏အလွန်မြင့်မားကျွမ်းကျင်လုပ်သားအင်အား & ပြည်နယ်မှကျနော်တို့နိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းများမှာအရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပိုက်ဆံသည်တန်ဖိုးကပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ရိုးရိုးသားသားစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုထူထေ​​ာင်သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိရန်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်မှအိမ်နှင့်နိုင်ငံခြားသို့အားလုံးသူငယ်ချင်းတွေကြိုဆိုပါတယ်။
1. ကို Safe နှင့်တည်ငြိမ်စဂဟေဆက်အငွေ့ extractor အော်တို detection နဲ့ချွတ်ယွင်းချက်များရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ် function ကိုရှိပါတယ်။
ထိုဂဟေဆက်အငွေ့ extractor ဆိုအနေအထားအတွက်ရပ်တန့်နိုင်အောင်နှစ်ဦးလက်နက်နှင့်အတူ2အလုပ်သမားတွေပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
3. ဂဟေဆော်ထုတ်လုပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်း flux နှင့်မီးခိုးမှသင်တို့ကိုတားဆီးပါ။
ရွှေ့ဖို့ 4. လွယ်ကူ, နည်းနည်းအာကာသယူ။
5. Angle နိမ့်ဆူညံသံများနှင့်ကြာမြင့်စွာတစ်သက်တာပန်ကာ, အလိုတော်မှာညှိယူခြင်းနှင့်နေရာနှင့်ရွှေ့ဖို့လွယ်ကူနိုင်ပါသည်။
6. ကဒီဇိုင်း, လွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရွေ့လျားနေသည့်ပေါင်းစည်းနှင့်ပိုက်လိုင်းချထား၏လိုအပ်ချက်မပါဘဲရဲ့။ system ကိုအတွင်း၌မြင့်မားသောအာဏာ brushless, DC မော်တာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ရှည်သောအသက်နှင့်နိမ့်ကျဆူညံသံသုံးပြီးနှင့်မြင့်မားသောလေကြောင်းရန်စီးဆင်းမှုကုသမှုများဖြစ်ပါတယ်။
1. ဂဟေဆော်, ဖြတ်တောက်ခြင်း, ကြိတ်, လေဆာနှင့်အခြားအငွေ့သည်သန့်စင်လယ်ကွင်းမှ Apply ။
2. fixed ဂဟေဆော်ရာအရပျသင့်လျှော်သည်နှင့်အာကာသကန့်သတ်လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ
လက်စွဲကို arc ဂဟေဆော်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကာကှယျကို arc ဂဟေဆော်, အာဂွန်ကို arc ဂဟေဆက်နှင့်အခြားဂဟေဆော်သန့်စင်အခါသမယ၏မီးခိုးသန့်စင်သင့်လျှော်သည် 3. , မြို့ရိုးကိုဂဟေဆော် / ဂဟေသည်အငွေ့ extractor တပ်ဆင်ထားသည်။
Benchtop ဂဟေအငွေ့ Extractor
Benchtop အငွေ့ Extractor